Kaftanka siyaasadda iyo Siyaasiyiinta Soomaaliyeed | allsanaag
Kaftanka siyaasadda iyo Siyaasiyiinta Soomaaliyeed
Barnaamijka Kaftaka Siyaasadda oo Baratakoolka Madaxda Soomaaliyeed wax ka bedelay?
Barnaamijka Kaftanka Siyaasadda ee Caan baxay, oo hadda umadda Soomaaliyeed aadka u daawadaan, ayaa wax badan ka bedelay dhaqankii Siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyaga oo ka baqaya in Kamaradda Kaftanku siyaasaddu qabato
Dhowaan barnaamijka kaftanka siyaasadda oo ay daadihiyaan Cali Xaraare iyo Yaasiin Ducaale, e ka baxa Talfishanka Kalsan waxa lagu soo qaatay nidaam xumo ka jirta Garoonka Adan Cade ee magaalada Muqdisho. Muuqaalka Kaftanka Siyaasada ee ugu danbeeyey, ayaa lagu soo bandhigay muuqaal uu wasiirka arimaha dibbadda Soomaliya Yuusuf Garaad uu lacag kaga qaadanayo nin Kaari ah diyaradda albaabkeeda . Waxaad kaloo ku arkaysay muuqaalka Kaftanka Siyaasadda nin xiiqsan oo aad u jeedo inuu Dayniila ka soo orday oo xaaska madaxweynaha Soomaaliya shaaxadaya oo dacalka haysta
Hadaba sida sawirka hoose ka muuqata dhaqankii madaxdii Soomaaliyeed wax badan ayaa iska bedelay. Wasiirkii, Isxanbaarkii, Tahriibkii, Dilaalkii saf ayeey ku wada jiraan . Diyaardda gudaheeda ayaa lagu xisaabtamayaa oo lacagta lagu kal qaadanayaa
Wasiirka arimaha dibadda iyo macaamiishiisa
Wasiirka Xanaanada Xoolaha dhirta iyo daaqa Shekh Nur Mohamed Hassan , Xildhibaan Adan isaak iyo Madax kale oo saf kula jira
← Daraawiish iyo SYL yaa Soomalai xoreeyey? Wasiirka Qorshaynta iyo Agaasimayaasha Wasaaradaha oo kulmay →